I-China TMD-301 i-Eddy-current Detector yoMvelisi kunye noMthengisi | TMTeck
I-TMD-301 i-Eddy-yangoku i-Detector
I-TMD-301 sisilinganisi esinyukayo se-electromagnetic ultrasonic gauge, esinokulinganisa ubungakanani bayo nayiphi na into yentsimbi okanye yemagnethi ngaphandle kokudibanisa iarhente okanye imowudi engadibaniyo, ikhutshelwe ngaphandle yiT TMTeck Instrument Co, Ltd.
I-TMD-301 ephathekayo ye-eddy-current detector iyisistim / i-apparatus yokubona i-eddy-current kunye nokwamkelwa kwe-eddy-yangoku, i-elektroniki yedijithali kunye neendlela zobuchwephesha. Esi sixhobo siphuhliswa kunye nomsebenzi wokubonisa i-eddy-yangoku ye-impedance ichnography. Amanqanaba ayo okubhaqa avela kwi-50Hz-10MHz, eyenza ukuba ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zokufumana iintsimbi ezahlukeneyo. Kugqwesileyo ekusebenzeni nasekusebenziseni amandla asezantsi, kunye neeyure ezingama-6 zobomi bebhetri kwinkonzo engapheliyo.
● I-TMD-301 iphuhlisiwe ukuba isetyenziselwe ukufumanisa ukungalunganga, ukulinganisa ubukhulu kunye nokuvavanywa kokuqhutywa kombane, ngokuqeshwa kweyona ndlela intsha yokumisela yedijithali.
● Iphaneli yokusebenza elula kunye neqhina elenzelwe yonke into.
● I-TMD-301 ilungele ukubonwa kwizinyithi ezahlukeneyo nakwiziqwenga zemizi-mveliso. Iziphene ezinje ngokuqhekeka kweentsimbi, iziziba, imiqolomba, imiqolomba, ukukrwela, kunye nokujika okunqamlezayo okanye ukwahlula kumbhobho wobhedu, umbhobho wokungabi namthungo kunye nombhobho wokungabinanto unokufumana ukuziva okuphezulu.
● Imisebenzi eyongezelelweyo efana nokulinganisa ubukhulu bokulinganisa kunye nokuvavanywa kokuqhutywa kombane kuyafumaneka ukuze kwenziwe ngokwezifiso.
Range rhoqo 50Hz～10MHz
Qaphela iDrayivu Amanqanaba ayi-8 anokulungiswa
Uluhlu lweNqanaba lesiKhokelo seShift 359 °（inyathelo 1 °）
Ukuzuza 0～I-80dB（inyathelo 0.5dB）
Ukuphindaphindwa kwesampulu I-40MHz, ukufunyanwa kwedatha eyi-12-bit
Icebo lokucoca ulwelo Wave Icebo lokucoca ulwelo kwidijithali
Iyothusa Ukothuka kwenqanaba (indawo echaziweyo efumanekayo: A, B, C)
Uhlobo lokuhlola Ukubonakalisa, umahluko, kunye nokungafaniyo
Indlela yokubonisa Impedance ichnography / Isiseko sexesha
Indlela yokulinganisa Idijithali
Umboniso 5.7 '640 × 480 screen TFT screen, umboniso entle iinkcukacha
Ukugcina Imifanekiso okanye useto kunye nokuphinda udlale
Unxibelelwano I-USB comm port (efanelekileyo kwi-PC)
In-set Power unikezelo umthamo omkhulu webhetri kwinkonzo yeeyure ezingama-6 ngaphandle kokunqunyulwa
Ukuhanjiswa kwamandla DC 12V, DC 12V (ngokusebenzisa iadaptha yamandla)
IDimensioon 166mm × 246mm × 47mm
Egqithileyo Imitha yedijithali yeFerrite TMF110
Okulandelayo: Eddy yangoku Imitha yokuSebenza kombane TMD-102
TMTECK TC-200 Crack detector yokufumanisa i-crac ...
Iibhloko zokuLungisa iiPayipi, Ulungiso lwee-Ultrasonic, Iibhloko zokuLungisa, Uvavanyo lweBhloko yoVavanyo, Uvavanyo lweBhloko, Iintambo ze-Ultrasonic Transducer,